Orinasa scooter ho an'ny olon-dehibe - Mpanamboatra scooter ho an'ny olon-dehibe, mpamatsy
Scooter an'ny olon-dehibe JBHZ 52
Fanahy iniana ialana ireo trangan-javatra ireo satria raha scooter tsotra fotsiny izy ireo dia mahalana vao mahazo lanja amin'ny vola. Raha mikasa ny handany dolara an-jatony ianao dia azonao atao ny misafidy scooter elektrika.
Manoro anao aho mba jereo koa ny scooter elektrika tsara indrindra ho an'ny olon-dehibe. Lafo kokoa izy ireo, fa tena mahafinaritra ny mitondra fiara ary tsy hampiditra ny daka ataonao.
Ho an'ireo izay matetika mivezivezy miala amin'ny asa amin'ny scooter, angamba fitateram-bahoaka
5,2 kg ihany ny lanjany, ary haingana sy mora mivalona izy io, midika izany fa tsy tokony hanana olana ianao amin'ny fitondrana azy aminao.
Ny kodiaran'ity scooter olon-dehibe ity dia manana savaivony 180mm, izay midika fa manome fitoniana tsy mampino.
Ny endrik'izy ireo koa dia mateza tokoa, midika izany fa na dia mampiasa PU Wheels isan'andro aza ianao dia afaka maharitra ela ireo kodiarana ireo.
Ny haben'ny kodiarana dia hiantoka ihany koa fa ity scooter ity dia haingana kokoa sy malefaka kokoa noho ny scooter hafa mitovy aminy eny an-tsena
Ity scooter olon-dehibe manokana ity dia tena compact. Araka ny hitanao avy amin'ny sary etsy ambany, dia misy fantsony azo ovaina ary azo ampidirina ao aminy ihany koa ny tahony. Ny mekanisma mamoritra dia malefaka sy matanjaka be.
Scooter an'ny olon-dehibe JBHZ 56
Scooter azo ahitsy
Ity scooter JBHZ-56 ity dia afaka manohana lanja farany ambony hatramin'ny 180 pounds. Ny famitana dia manana fanitsiana lehibe, raha ny marina, na iza na iza manomboka amin'ny ankizy ka hatramin'ny olon-dehibe dia afaka mampiasa azy.
Ny iray amin'ireo zava-nisongadina tamin'ity scooter ity, ary ny antony nampidirinay azy io tamin'ity lisitra ity, dia satria tsy misy ilana azy ilay shock absorber.
JBHZ-56 avo lenta scooter azo zahana mijoro
Azonao atao ny miampita ilay faritra mikitoantoana ary tsy mahatsapa na inona na inona. Na ny kodiarana aza dia manana bearings kalitao avo lenta ao anatiny mba hiantohana ny fandehanana mora indrindra.
Ny kofehin'ilay scooter dia manana fihazonana mafy, izay midika fa rehefa mitondra fiara amin'ny faritra mikitoantoana ianao dia tsy hahatsapa ny hovitr'ireo zavatra mavesatra.
Ny iray amin'ireo fiasa tena ilaina dia ny rafitry ny frezy roa. Betsaka ny olona nitaingina môtô scooter, saingy hitany fa mila miadana haingana izy ireo.
Scooter an'ny olon-dehibe JBHZ 54
Matetika dia mety ho fomba iray mifangaro ny hamely haingana ny vodin-damosina, indrindra raha tsy mampiasa teknika mitaingina tsara ianao. Tsy ho olana amin'ity scooter kick ity izany.
Tsy vitan'ny hoe manana ny freins mahazatra anao amin'ny kodiarana any aoriana ianao, fa misy ihany koa ny frein-tànana natsofoka ao amin'ny baoritra, izay ahafahanao mifehy bebe kokoa an'ity scooter an'ny olon-dehibe ity.
Tokony hisy toerana malalaka eo ambonin'ny tokotanin-tsambo mba hanomezana toerana malalaka ho an'ny tongotrao, na lehibe toy inona aza izy ireo. Ity scooter JBHZ-04 ity dia iray amin'ireo scooter ahazoana aina mora indrindra eny an-tsena ary tsy ho diso fanantenana ianao amin'ny zavatra niainanao.
Scooter an'ny olon-dehibe JBHZ 53
Raha ny marina dia ity no ho scooter daka ho an'ny olon-dehibe mora indrindra amin'ity lisitra ity, saingy azo antoka fa tsy midika izany fa scooter ratsy izy io, fa tsy avy amin'ny eritreritra akory.
Ity ihany koa no iray amin'ireo scooter daka ho an'ny olon-dehibe amin'ity lisitra ity izay tsy mila fivoriambe avy amin'olona. Sintomy avy eo anaty boaty fotsiny izany dia afaka mandeha ianao.
Ity scooter ity dia namboarina tamin'ny alim-baoron'ny fiaramanidina izay midika fa maivana be izy io, nefa midika koa fa namboarina haharitra izy io. Vita tamin'ny alim-bolan'ny aliminioma io.
Na dia tsy soso-kevitra amin'ny ankapobeny aza dia afaka mandondona mora foana ity scooter olon-dehibe ity ianao ary hivoaka tsy ho voakarakara amin'ny farany.
Ny JBHZ-03 dia natsangana ho an'ny olona lava kokoa. Manana fanitsiana haavo be dia be ianao eo amin'ny kitapom-batsy, izay mampahazo aina ny mandeha. Ireo kodiarana lehibe kokoa dia manome fitoniana be ho an'ilay olona 'mavesatra' kokoa any.
Scooter an'ny olon-dehibe JBHZ 51
Scooter Kick 2-Wheel Kickable maivana, T-bar Black Sturdy misy fantsom-baravarana malefaka dia misy fanitsiana 3 izay mora foana ny manidy azy ireo ary mitana fikorontanana manohitra ny fikorontanana miaraka amina rafitra fampirimana misy patanty izay mirodana mora foana fitehirizana sy fitaterana Ny tokotanin'ny alimina marihitra dia misy fantsom-pifandraisana anti-slip izay.
Scooter an'ny olon-dehibe JBHZ 55
JBHZ-55 dia manana kodiarana lehibe 200mm, vita amin'ny hazakazaka avo lenta sy polyurethane avo lenta, noho izany dia tsy mila miahiahy momba ny mitaingina terrain-tery ianao.
JBHZ-55 Skuter mandeha tongotra tokana
Tena mety amin'ny fitsangantsanganana goavambe tokoa izy ireo. Raha "" mirehareha "ny mpifanila vodirindrina aminao" amin'ireny toe-javatra ireny dia azo antoka fa ny JBHZ-55 no lalana tokony haleha.
Ity maodely ity koa dia misy frein any aoriana mifandray amin'ny tsorakazo amin'ny alàlan'ny lever, ka hahatsapa tena ho voaro ianao rehefa mifehy ny scooter avy amin'ny tohatra.
Izy io koa dia manana mpiambina fotaka, izay afaka miaro anao sy ilay scooter tenany tsy hiparitaka amin'ny fotaka na ny tontolo mando, fa raha manitsaka azy amin'ny tongotrao ianao dia azo ampiasaina ho fitsaharana ihany koa.
Scooter an'ny olon-dehibe JBHZ 57
Ny scooter dia mora entina. Azo antoka, mety tsy hikorisa ao anaty kitaponao na zavatra hafa toa izany izy, saingy tsapan'ny mpamorona izany. Ny rafitra aforitra dia mamela anao hamoritra ny scooter afaka segondra vitsy fotsiny ary hitafy izany eo an-tsorokao, amin'ny fehikibo.
Ny olona amin'ny lafiny mavesatra kokoa, na dia mitaingina an'io aza dia mbola hahita fa ny scooter dia afaka mitsoraka amin'ny tany amin'ny hafainganam-pandeha haingana, izay midika fa ny scooter dia tonga lafatra amin'ny fivezivezena isan'andro na iza ianao na iza.
Ny tena maharatsy an'ity scooter ity fotsiny dia ny zava-misy fa mila fananganana kely avy hatrany ao anaty boaty. Saingy, na dia izany aza, dia manamafy fotsiny ny visy roa ary ho vonona ny hamely ny arabe amin'izay toerana onenananao ianao.